सामुदायिक विकासमा महिला सहभागिता: ‘सशक्तिकरण अभियानले स्वावलम्बी बनायो’ | Mechikali Daily
सामुदायिक विकासमा महिला सहभागिता: ‘सशक्तिकरण अभियानले स्वावलम्बी बनायो’
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: ७ माघ २०७५, सोमबार ०२:१७
बुटवल, माघ ७ । नयाँ जीवनको लागि हातेमालो, बुटवलले सञ्चालन गर्दै आएको समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम अब स्थानीय समुदायले नै सञ्चालन गर्ने भएका छन् । बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. १७, १८, १९ र ११ मा समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम गर्दै आएको उक्त संस्थाले समुदायलाई नै हस्तान्तरण गरेको छ ।
साविकको मोतिपुर र बुटवलको वडा नं. ११ का केही टोलहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई अब सोही टोलका समुदायले आफैँ सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संगठित गर्ने र जागरुक बनाउने संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेका छन् । यस क्षेत्रमा विगत छ वर्षदेखि सामुदायिक विकासको लागि सशक्तिकरण परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो ।
विगत छ वर्षदेखि समुदायमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको उक्त संस्थाले आइतबार मोतिपुरमा एक समारोहको आयोजना गर्दै अभियान सफल भएको जनाएको छ । साथै अभियानलाई नगरप्रमुख शिवराज सुवेदी र वडा अध्यक्षहरुमार्फत समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा बोल्दै प्रमुख सुवेदीले महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन र महिलाको चौतर्फी विकासको लागि सशक्तिकरणलाई पनि सँगै अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम गरेको संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
संविधान र नगर सरकारले बनाएका स्थानीय कानूनहरुले पनि महिलाका अधिकारका, अवसर र पहुँचका जस्ता कुरामा विशेष व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
छ वर्षको अभियानले यस क्षेत्रका महिलाको अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने बनाएको र उनीहरूको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने निकायमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बनाएको नयाँ जीवनका लागि हातेमालो बुटवलका अध्यक्ष शैलेक्द्रकुमार गौतमले बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरुमा आत्मविश्वास बढाउन आफूहरु सफल भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद विनोद पहाडीले महिलामा आर्थिक पहुँच पु¥याउने खालका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अभियानले महिलाहरुमा मात्रै नभइ सिंगो समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै अब नयाँ ढंगले आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
त्यहाँका महिलाहरुले विभिन्न १३ वटा स्वावलम्बन समूह गठन गरेर अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । महिलाहरुले आफ्नै सहकारीसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी समूहहरुमा गरि तीन सय ६२ जना महिलाहरु सक्रिय रुपमा अभियानमा आबद्ध छन् । समूहमा करिब आठ जना पुरुष सदस्य पनि छन् । यी समूहबाट लाभान्वित संख्या भने झण्डै तीन हजार रहेका छन् । आइतबारको कार्यक्रममा अभियानको सफलताको कामना गर्दै यी १३ वटा समूहका अगुवाहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
त्यहाँ मानवीय विकासका लागि अभियान, अपांगता भएकाहरुका लागि सहायता अभियान, कुष्ठरोग प्रभावितहरुलाई सहायता, सामूहिक खेती, सीपमूलक तालिम, खानेपानी आयोजना, सहकारी र परिवार सुधारलगायतका विशेष अभियानहरु सञ्चालन गरिएको र यस्ले सकारात्मक प्रभाव पारेको संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक मनकुमारी पाण्डे न्यौपानेले बताउनुभयो ।
अभियानले महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउनुको साथै सशक्तिकरणमा समेत सहयोग गरेको भन्दै वडा अध्यक्षहरुले अभियानलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
अगुवा महिलाहरु गीता चौधरी, लोकमाया कंडेल तथा माया भण्डारी र राजकुमारी मल्ललगायतले अभियानले आफूहरुलाई स्वाबलम्बी बनाएको बताउनुभयो । उहाँहरुले समुदायमै रहेको स्रोत समेत नदेखिएको, आफ्नै क्षमता आफूहरुलाई नै थाहा नभएको र अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट अभियानले आफूहरुलाई सशक्त बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत सीता थापा र सञ्चालन कमल बरालले गर्नुभएको थियो ।